Chii chinonzi PepperFlash uye Ndinotanga Sei?
Flash yave yakareba iri chigadzirwa chakakurumbira kune vakawanda vanoita webhusaiti sezvavanovabvumira kuita zvitukuro nemhepo yakasimba.
Kushandisa flash player zvakanaka kubatanidza mavhidhiyo nemimhanzi pawebsite yako, kuunza nzvimbo yacho kuupenyu. Izvo zvinokoshawo mumitambo yakawanda yepaIndaneti nhasi.
Kunyange kana iwe usisiri kugadzira chero mawebsite, unofunga kuti wakambosangana nechidimbu chechigamba chechigamba kare, zvichida paunenge uchiedza kutamba mavhidhiyo pane webhusaiti yawakada.
Kuvandudza ruzivo rwako rwekunyoresa neizvi split keyboard iyo inopa kusvika ku9 "yekuparadzanisa.
Nenzira, misika yave ichitungamirirwa neAdobe Flash Player, uye iyo iri kuenda-kusarudza kune vanhu vakawanda vanoda kushandisa flash panzvimbo dzavo.
Zvisinei, haisi iyo chete yekusarudza.
Pepper Flash Player iGoogle chigadzirwa, iyo vashandisi vanogona kushandisa chete chromium, uye Google Chrome.
Pasinei nekukanganiswa uku, ndiyo nzira yakakurumbira yeAdobe.
Muchikamu chino, tichaona kuti tingaiisa sei uyewo kuti tingavhiringidza sei kana iwe usingadi kushandisa Pepper Flash pakombiyuta yako.
Nzira yekuisa Pepper Flash
Paunotora Pepper Flash, inouya pane imwe Debian pakiti. Vashandi vanogona kusarudza pakati pePepper Flash neAdobe Flash player, nekungoisa pakakodhirwa.
Muchikamu chino, tichavhara nzira yekuisa Pepper Flash pane zvitatu zvakasiyana zvekushanda kweDebian.
Kuti uise Pepper Flash pakombiyuta yako, tevera matanho ari pasi apa pane chero OS iwe unawo pamakombiyuta yako.
Debian 9 "Tsika"
Nokutambisa, unogona kuwana Pepper Flash Player munharaunda yechirongwa.
Kuti uwane simba rokutambisa zvinyorwa zviripo kuti ushande pane yako system, enda kune /etc/apt/sources.list
Wedzera iyi mutsara: deb http://http.debian.net/debian kutambanudza pfungwa huru
Zvadaro, mushure mekunge mawedzera dhipatimendi kune mazita enyu ezvinyorwa, unofanirwa kuvandudza nharaunda yemo. Ita izvi nokunyora apt-get update.
MuDebian 8, unogona kuwana Pepper Flash Player munharaunda yechirongwa, iyo iri mujessie-backports.
Chokutanga, shandisa jessie-backports purogiramu yako. Ita izvi kuburikidza nekuenda kunzvimbo yako yekutsvaga mazita kana kumashure. Ichi chichava chimwe che /etc/apt/sources.list or /etc/apt/sources.list.d/backports.list.
Paunosvika pane zvinyorwa zvinyorwa kana nhepfenyuro dzemashure, unoda kuwedzera uyu mutsara: deb http://http.debian.net/debian jessie-backports main contrib
Pakupedzisira, mushure mekunge uwedzere dhipatimendi kune zvinyorwa zvako, iwe unofanira kugadzirisa nzvimbo yemo. Ita izvi nokunyora apt-get update.
Kana uri kutarisira Debian 7 system operating, inozivikanwawo se "Wheezy", saka une nzira mbiri dzakasiyana dzekuisa Pepper Flash.
Tevera mirayiridzo iri pasi apa kune 32 bits kana 64 bits, zvichienderana neiyo OS iwe.
Chokutanga, unofanira kubvisa chero imwe purojekiti yeplasti ino parizvino. Tora iyi: zvakakodzera-kubvisa flashplugin-isina
Zvadaro, unofanirwa kuwedzera zvinyorwa zvemashure kumashoko ako akange aripo. Ita izvi nekunyora: deb http://http.debian.net/debian wheezy-backports main contrib
Kana kambani mabheji akatsigirwa kune mamwe mabhuku, iwe unogona kuisa Pepper Flash Player. Tanga: apt-tora yekuvandudza && apt-tora kuisa pepperflashplugin-isiri yemahara
Gadzira a Pepper Flash Player zvinyorwa, uye zvino symlink. Ita izvi nekunyora mitsara miviri inotevera:
Isai mapeji kuti muve nekodzero yekufambisa.apt-get install cmake pkg-config ragel libasound2-dev libss-dev libglib2.0-dev libconfig-dev libpx1.0-dev libgl1-mesa-dev libre-dev libgtk + 2.0-dev libgles2-mesa-dev libxrandr-dev g ++ git libpulse-dev
Dhavhidha kori yekodha uye uiite, kuitira kuti ugone kuwana faira:libfreshwrapper-pepperflash.so. Ita izvozvo nokunyora nhamba inotevera:
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX = / nzira
Gadzira purogivha yepeji yeAraweasel (inoenderana neFoodFox)
Pedyo Iceweasel, uye wozorora zvakare. Iye zvino uchava Pepper Flash Player.
Kana iwe usati watozviita, danho rokutanga nderekuwedzera mabheji kumashure mako mazita. Chenjerera kuongorora kuti chikamu che "contrib" chinowanikwa.
Kushandisa Terminal seMudzi, shandisa mutemo uri pasi apa kuti uise Pepper Flash Player kubva paG Wheezy Backports:
aptitude -t wheezy-backports install pepperflashplugin-nonfree
Paunenge uchiri kushandisa Terminal seMudzi, shandisa mutemo uri pasi apa kuti udzoke Pepper Flash Player pane yako yekushandisa:
Vhura zvose zvekushandura windows.
Dzokororazve browser yako. Pepper Flash Player inofanira kunge iri kushanda iye zvino.
Mushure mekunge yakanyatsogadziriswa, une matanho maviri okuzvidira:
Ne 'Terminal' seMudzi, shandisai murayiro uri pasi apa kuti uone kuti Pepper Flash yakagadzirwa sei:
Kana iwe uchida kushandisa Pepper Flash ne Iceweasel, unofanira kuisa imwe purazi, inozivikanwa seve freshplayer.
Ko kana Pepper Flash Player iri kushanda?
Kana uri kuwana zvimwe zvinetso zvinomhanya Pepper Flash, kune nzira shomanana dzaunogona kugadzirisa mamiriro acho ezvinhu.
Chokutanga, pedo zvose Chrome kana Chromium browser windows. Kana vese vakavharwa, Flash ine mukana wekugadzirisa zvakare. Reopen a mubrowser window kuti uedze.
Kana izvozvo zvisingagadziri dambudziko, edzaizve kubhura kombiyuta. Izvi zvinogona kushanda sezvo pane zviitiko apo Chrome kana Chromium windows ramba rakanyungudutswa muchiyeuchidzo. Kuburikidza kwakaoma kunogona kuva zvose zvinodiwa kugadzirisa dambudziko racho.
Kana izvozvo zvikundikana zvakare, iwe unoda kuita zvishoma basa.
Tanga nekudzima maikirini ese eCromium uye Chrome, pamwe chete nekuwedzera. Izvi zvinongova chiyero chenguva pfupi. Iwe unogona kuchinjazve zvinhu zvose gare gare.
Kana uchinge wakavadzivisa zvose, teerera foni mune imwe firiji re browser.
Pakupedzisira, yeuka kuti Pepper Flash inoshanda chete muChromium kana Chrome. Kana iwe uchida kuishandisa ne FireFox kana Iceweasel, uchada kuisa freshplayer pakiti.
Nzira yokudzivisa nayo Pepper Flash Player
Pepper Flash yakavakwa muGoogle Chrome mubrowser, uye naizvozvo ndiyo iyo default flash player.
Zvisinei, nemhaka yokuti ndizvo zvazviri, hazvirevi kuti iwe wakanamatira Pepper Flash kana iwe usingadi kuishandisa.
Pane nyaya shomanana nemutambi uyu, kusanganisira kuora kwezwi, izvo zvinokonzera rwiyo rwekudhi kana robotic ruzha. Uyezve, zvinetso zvekufananidza zvinogona kuvhiringidza sezvinonzi audio nemavhidhiyo hazvienderani.
Kana uri kuwedzera zvakawanda zvevhidhiyo zviri mu site yako, unoda kuti ive yepamusoro-soro. Kuva nehurukuro yehurukuro uye mashoma sync ndeyechokwadi kutungamirira kune zvimwe zvikwangwani.
Kune rumwe rutivi, vashandisi vanogona kusarudza imwe browser.
Asi, kana iwe ukasarudza kushandisa Chrome, saka zvakanaka kuti uzive kuti unodzivisa sei Pepper Flash.
Tevera matanho ari pasi apa kuti usiye Pepper Flash in Google Chrome:
Vhura peji yeWatch Plugins. Ita izvi nokunyora URL inotevera muchibvumirano chebhuku rekushandura: chrome: // plugins
Enda kune "[+] Mashoko" bhatani, iri kumusoro-kurudyi kwehwindo. Izvi zvicharatidza tsanangudzo yepodha yako yose yakaiswa. Dzvanya bhatani.
Tsvaga iyo Flash Plugin Chikamu pane zvakarongwa. Ikoko kunogona kunge kune maverengi emafaira mune chikamu chepaugin.
Paunowana Flash chikamu, panofanira kunge kune mairi maviri, kana kuti dzimwe shanduro dzakasiyana dze Flash dzinotsanangurwa. Kana pane imwe chete yakanyorwa, shanyira webhusaiti yeAdobe kuti uchengetedze yakapfuura Adobe Flash Plugin, iyo ndeyevasiri veInternet Explorer browsers.
Purogiyona yekutanga inoratidzwa muChikwata che Flash chinenge chiri Pepper Flash kushandiswa. Iwe unogona kuzviona nekuwana "PepperFlash" muKick code code.
Tsvaga iyo "Dzinga" link for this plugin. Dzvanya chibatanidza kuvhara Pepper Flash Player.
Zvadaro, swederai zvose Chrome browser windows.
Vhurazve Google Chrome.
PepperFlash May Uya kuMozilla Firefox
Kunyange zvazvo Adobe Flash Player achiri chiitiko chisingazivikanwi, pane nhaurirano pamusoro pePepperFlash iri kuendeswa kuMozilla Firefox.
Sezvo teknolojia inofambira mberi, mapapanhau eNPAPI ari kuwedzera mune zvakaitika kare, zvinoreva vashandisi vachangouya ne software sePepper Flash ikozvino yakavakwa-in.
Google Chrome yakatova nayo. Kana Mozilla inotevera, izvi zvinogona kushandura kuchinja kukuru, zvichida kukanganisa dzimwe browsers.
Nokuti ikozvino, zvakadaro, Adobe anotonga nzvimbo. Asi kana Google inoratidzira nyaya nePepper Flash Player, dzakadai sematambudziko ehurukuro, ipapo injini yekutsvaga inogona kuderedza nzira yavo kusvika kumusoro flash player misika munguva yemberi iri pedyo.
Featured Image: CC via Adobe Forum
Isa mune imwe chinyorwa imba neimba itsva guru screen, backlit monitor inopabe mumakisi mashanu akasiyana uye mapuroji emitengo.
Maitiro ekuisa Docker pane Debian 10
Ndinga vhara sei Adobe Flash yemukati mune yangu browser?
Maitiro Ekuita Nyore Kuisa Debian Linux
Shanduro yeDebbian Linux 8 / 9 yakasunungurwa
Debian vs Ubuntu: Ndeupi Musiyano? Ndeupi Waunofanira Kushandisa?
Filed Under: Adobe Flash